अन्तरवार्ता Archives - Page4of6- Daily State News
समकालीन राजनीतिक-सामाजिक डिस्कोर्समा असहमति लेखिरहेका लेखक हुन्— सौरभ । उनी एकेडेमिक इतिहासले फेला नपारेका गुढ तथ्य उधिन्छन् । इतिहासलाई वर्तमानसँग जोडेर लेख्नु उनको विशेषता हो । नेपाली इतिहास, संस्कृति, पहिचान र राजनीतिबारे मूलधारको बुझाइमाथि प्रश्न गर्ने उनका ‘सौरभका पच्चीस वर्ष’ र ‘असहमति’ प्रकाशित छन् । ‘असहमति’लाई उनको वैचारिक स्पष्टताको विशिष्ट मोड मानिन्छ । त्यस्तै सुजित […]
ईश्वर पोखरेललाई निधीको प्रश्न- दोस्रो संविधानसभा गल्ती थियो ? काठमाडौं । अन्तरवार्ताका लागि शुक्रबार बिहान मध्यबानेश्वरस्थित निवासमा पुग्दा पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी चुनावी प्रचारका लागि बिराटनगर जाने तयारीमा थिए । निवासमा कांग्रेस कार्यकर्ताको भीड थियो । दोस्रो चरणको चुनावमा केपी ओलीले जिल्ला-जिल्लामा पुगेर आक्रामक प्रचार-प्रसार गरिरहेका बेला कांग्रेस नेता निधीले चाहिँ कांग्रेसको प्रचार शैली देखेर कम्युनिष्टहरु […]
‘व्यापारीको नेता भनेपनि सामाजिक काम मै छु ’
इटहरी । इटहरी उप महानगर भएर मात्रै होइन प्रदेशकै केन्द्र भएर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा चासोको केन्द्र बनेको छ । बढ्दो शहरीकरण, भौतिक पूर्वाधारको सुगमता र व्यपारीकरणले इटहरी देशैभरमा चर्चामा छ । यही चासोको रुपमा हेरिएको इटहरी उपमहानगरको नेतृत्व गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले रोहित प्रसाईलाई मेयरको रुपमा अघि सारेको छ । डुवानको समस्या ,भौतिक पूर्वाधारको कमी, शिक्षा […]
धनगढी उपमहानगरः ‘कांग्रेसले गुन लगायो, जितेरै छाड्छु’
मेयरका उम्मेदवार नृप वड भन्छन्- पार्टीका साथीहरुको साथ छ ६ असार, कैलाली । प्रदेश नम्बर ७ को एकमात्र उपमहानगर धनगढीमा नेपाली कांग्रेसले नृप ओड, ४५ लाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले ढिलो गरी उम्मेदवारको टुंगो लगाएकाले सीमित समयको सदुपयोग गर्दै उनी अहिले चुनावी प्रचारमा घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।घरदैलो गर्दैगर्दा सुस्ताउने क्रममा नृप ओडलाई दलित […]
नेपालको राजनीतिकमा आफ्नो अनौठो किसिमको छाप बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै चतुर राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । उनले नेतृत्व गरेको माओवादी आन्दोलनको पार्टी, पहिलो पार्टी बनेर होस् अथवा तेस्रो पार्टी, उनी त्यसको प्रमुखको हैसियतमा अब सत्ताका अङ्ग जस्ता देखिन्छन् । गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी राष्ट्रपतिको सपना देखेर संसदीय अभ्यासको प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका […]
कुमार लिङदेनजी कुहिरोको काग बन्नुभयोः खगेन्द्र माखिम इटहरी । पूर्वी नेपालमा सामान्य प्रभाव रहेको संघीय लिम्बुवान पार्टी यतिबेला छिन्नभिन्न भएको छ । खगेन्द्र माखिमको नेतृत्वमा एउटा समूह उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा समाहित भएको छ । कुमार लिङदेनले राजपासँग गठबन्धन गरेर लिम्बुवान बन्द लगायतका चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, उनकै कार्यकर्ताहरु ताप्लेजुङ, […]
मंगोलियन अनुहारलार्इ अवसर थिएन
सहिद रत्नकुमार वान्तवाको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘देउमाईको किनारा’बाट अभिनय यात्रा आरम्भ गरेका प्रेम सुब्बा अभिनय, निर्माण हुँदै निर्देशनमा लागेका छन् । बुबा भारतीय सेनामा कार्यरत रहेका बेला भारत र बर्माको सीमा क्षेत्र मिजुराममा जन्मेका सुब्बा देउमाईका किनारामा अभिनय गर्दा २८ वर्षका थिए । उनले चलचित्र नुमाफुङ, बलिदान, निसानीलगायत धेरै चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । निशानी […]
असार ५ देखि काठमाडौंमा हुने भनिएको एसियन प्रिमियर लिगलाई लिएर आशंकाहरु उब्जिएको छ । नेपाली खेलाडीको सहभागिता तथा आयोजकको पादरर्शीतामाथि क्रिकेट खेलाडी संघले समेत प्रश्न उठाएको छ । तर, आयोजनाका लागि अनुमति दिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मौन छ । निकै प्रयासपछि राखेप सदस्य सचिव केवश विष्ट टेलिफोन सम्पर्कमा आए । उनीसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः […]
दिनेश थपलियाको प्रतिप्रश्न-गाडीभित्रै कार्यालय चलाउने ? २६ जेठ, काठमाडौं । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग अलि बढी नै भइरहेको छ । यहीबेला स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई एकजना नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षले सिंहदरबारमा फोन गरेर सोधेछन्- ‘म गाडी किनौं हजुर ?’ स्थानीय विकास विज्ञसमेत रहेका सचिव थपलियाले धुलिखेलमा आयोजित ३ नम्बर प्रदेशका नगररपालिका […]
नेपालको कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख अर्थात नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको सङ्घीयता र कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो अध्ययन रहेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी काम गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिन धुलिखेल पुगेका सुवेदीलाई भेटेर रातोपाटीका लागि सङ्क्षिप्त अन्तरवार्ता गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले । देश सङ्घीयतामा गइसक्दासमेत कर्मचारीतन्त्रको बुझाइ विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ, […]